Ịre ahịa nduku na mgbakwunye bara uru na Etiopia - Magazin Sistemu Nduku
в Akụkọ Mmeri, Akụkọ ụwa, News, Nhazi nke nchekwa, Injinia / Teknụzụ, Аковочное оборудование
Anyị na-aga n'ihu na-ebipụta ihe pụrụ iche sitere na WPC (World Potato Congress), na-ekwu maka nhazi nke usoro mmepụta mkpụrụ nduku nke ọma na Africa.
Nzukọ nduku ụwa ga-eme site na Mee 31 ruo June 3 na Dublin, Ireland. Ihe omume a ga-akpọkọta ndị ọkachamara gụnyere ndị na-akụ poteto, ndị na-ere ahịa, ndị na-ebubata ihe, ndị na-ebubata na ndị na-ebupụ ma mkpụrụ na poteto.
N'izu a, anyị na-ekwu maka ire ahịa na poteto na-agbakwunye uru na Etiopia.
Enwere ndị ọzọ na-amị mkpụrụ na Yeldu, ebe Guta bi, mana ọtụtụ ndị mara ugbo ya dị ka isi iyi nduku mkpụrụ dị mma.
Ndị nnọchiteanya nke otu ọha, NGO (mba na mba ụwa), ụlọ ọrụ nzuzo na onye ọrụ ugbo si n'akụkụ dị iche iche nke mba na-abịa ịzụrụ mkpụrụ.
Na mbụ, Potato Center (CIP) na-atụ aro ka ndị na-azụ ahịa gaa Yelda, ebe ndị na-akụ mkpụrụ n'ebe ahụ na-agbaso ihe QDS chọrọ iji mepụta mkpụrụ dị mma. Ọzọkwa, Holleta kpọsara otu oge nduku mkpụrụ nke Guta na onye ọrụ ugbo ọzọ, Tesfaye, na webụsaịtị Solagrow na n'akwụkwọ akụkọ a na-agụkarị, The Ethiopian Reporter.
Ndị na-azụ ahịa malitere inye ndị ọzọ adreesị ya, Guta n'onwe ya chịkọtara adreesị nke ndị nwere ike ịzụrụ ihe ma kpọọ ha ka ha mara na o nwere mkpụrụ nduku maka ọrịre. N'ihi ya, ọ resịla ọtụtụ narị tọn poteto mkpụrụ nye ndị otu na-abụghị ndị gọọmentị, gụnyere World Vision, maka ọrụ ha. N'afọ gara aga, ọ rere ihe dị ka tọn 36 nke mkpụrụ osisi Gudene na onye nhazi Dutch Senselet (nke pụtara "agbụ" na Amharic, asụsụ Etiopia bụ isi). Guta na-ebuga poteto ahịa ya n'ụgbọala nke ya gaa na nnukwu ụlọ ahịa ihe ọkụkụ dị n'èzí dị na Addis Ababa. Ọ na-arụ ọrụ ụlọ akụ n'ụzọ atọ bụ isi: site na nnyefe, ndenye ego na ego.
Guta na-erekwa ngwaahịa mmiri ara ehi ma na-akwado akụrụngwa ugbo. Ụlọ akwụkwọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọ tụrụ aro ga-eme ka ndị bi na mpaghara ahụ nwee ọtụtụ ọrụ, karịsịa maka ndị na-eto eto.
Ịmepụta uru agbakwunyere (nkwakọ ngwaahịa, nchekwa kwesịrị ekwesị, njem)
Guta adịghị ere poteto mkpụrụ n'oge owuwe ihe ubi, ma na-agbakwụnye uru site na ịchekwa tubers ruo mgbe ha na-emepụta ọtụtụ, mkpụmkpụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke siri ike nke na-adịghị agbaji n'oge njem na ịkụ ihe. Ndị na-azụ ahịa maara na poteto mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ ihe na-epulite na-amịpụta karịa, ha anaghị egbu oge ịkwụ ụgwọ karịa. O nwere gwongworo atọ nwere ikike nke tọn 35, nke na-enye ya ohere ibupụta mkpụrụ na poteto, na-adọtakwu ndị ahịa.
Tags: ahianduku nkwakọEtiopia
Na mpaghara Stolbtsy, ha na-eme atụmatụ ịhazi 160 puku tọn poteto maka mbupụ
A malitere ịkụ nduku na Turkmenistan